Dhallaan saddex ah oo lagu la'yahay carriga Gaza - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Amanda Duregård/Sveriges Radio
Dhallaan saddex ah oo lagu la'yahay carriga Gaza
La cusbooneeyay fredag 23 november 2012 kl 09.19
La daabacay fredag 23 november 2012 kl 08.56
Dhallaan saddex ah ayaa lagu soo waramayaa iney ku xaniban yihiin Qaza, iyadoona aan war laga helin wixii ka dambeeyey weerarradii Israa'iil ku qaadaan carrigaa oo ey iminka ka soo wareegtay muddo toddobaad iyo bar laga joogo. Waxaan sidoo kale caddeyn iney saddexda dhallaanka ahi nool yihiin iyo in kale. Hooyada dhashay dhallaanka Monica Granath ayaanay u suurtagelin inay wax xiriir ah la sameeyso dhallaankeeda wixii ka dambeeyay 8-dii bisha noveembar.
- Suurtagal iima noqon inaan wax xiriir ah la sameeyo wixii ka dambeeyey bilowgii weerarrada. Intii ka horeeysay waxaan ka ogaa in aaney wanaagsaneyn, haddase wax xiriir ah kama hayo, sida ay sheegtay Monica Granath.
Dhallaanka saddexda ah oo da’doodu tahay 13,10 iyo 9-jir, haystana dhalashada iswiidhiska ayaa bishii luulyo fasax ugu kicitimey dalka Masar iyaga oo aabbahood la socda, halkaasina oo ey uga sii safreen carriga Qaasa oo ey wixii intaa ka dambeeyey ku sugnaayeen. Dhallaanka ayey u suurtagashey iney hooyadood la soo xiriiraan, xitaa hadii dalka lagala baxsaday, hase yeeshee aaney u suurtagalalin sidii ay wax xiriir ah ula sameeyn lahayd wixii ka dambeeyey iska-hor-imaadkii carrigaa ka dhacay.
Sarkaal u hadlayey wasaaradda arrimmaha dibadda ayaa ka gaabsaday inuu wax ka sheego xaaladda saddexda ilmood isaga oo tiigsanaya qodobka sireeynaya howlaha qunsuliyadda, in dhallaankaasi nolol ku sugan yihiin iyo in kale, iyo sidoo kale in hoowl-wadeenno wasaaradda ka howl-galaa wax xiriir ah la sameeyeen dhallaankaa.
Ola Pihlbad oo ka howl-gasha qunsuliyadda dalkani ku leeyahay carrigaa oo u warrantay idaacadda caalamiga ah ee radiyaha Iswiidhen ayaa sheegtay in aanay wasaaradda arrimmaha dibadda ee dalku war aan ahayn in dhallaankaasi nolol ku sugan yihiin aanay ka hayn:
– Ma sheegi karno wax war ah ee ka duwan in saddexda dhallaanka ahi nolol ku sugan yihiin, sida ay sheegtay Ola Pihl Blad.